ILIFE A11, ihe ọzọ nwere ọtụtụ atụmatụ na ọnụahịa dị mma [Nlebaanya] | Ngwa akụkọ
Miguel Hernandez | 25/03/2022 22:38 | Emelitere ka 25/03/2022 22:40 | General, Nyocha
Ndụ nwere ezinụlọ nke ndị na-ehicha oghere nke robot na ụdị ngwaọrụ ndị ọzọ e mere iji nyere anyị aka n'ọrụ ụlọ anyị na, n'ihi nrụpụta ha dị mma na arụmọrụ ha, aghọwo ọkọlọtọ ụlọ ọrụ, ezigbo ntụaka mgbe ị na-achọ mmekọrịta dị n'etiti àgwà na ọnụ ahịa.
Kedu ka ọ ga - esi bụrụ ihe ọzọ, Kedu ka ọ ga - esi bụrụ ma ọ bụghị, anyị na - ewetara gị nyocha miri emi nke ọhụrụ ILIFE A11, onye na - ehicha oghere nke robot nwere njirimara dị elu na ọnụ ahịa dị oke ọnụ. Chọpụta anyị niile njirimara nke ILIFE A11 na ihe kpatara etinye ya dị ka ihe ọzọ na-adọrọ mmasị na ahịa.
1 Nhazi na ihe: N'elu elu nke ego
3 Ụdị nhicha na usoro 2-in-1
Nhazi na ihe: N'elu elu nke ego
Banyere imewe ahụ, ILIFE ekpebiela ịnọgide na-edobe ụkpụrụ nhazi ya, nke bụ isi nke ọtụtụ ngwaọrụ nke ụdị a na-ekekọrịta. N'okwu a, anyị na-eche ihu na ngwaọrụ nke 350 x 350 x 94,5 millimeters maka mkpokọta ịdị arọ nke karịrị kilogram 3,5, n'ime ụkpụrụ ụlọ ọrụ.
Maka akụkụ nke ala, enwere wiil abụọ nwere ihe nkuchi, wiil multidirectional dị n'ihu yana igwe mkpuchi silicone agwakọta na brush naịlọn iji nye ihicha nke ọma n'ụdị niile. Akụkụ azụ maka usoro njikọ mop na otu ahịhịa na-atụgharị n'akụkụ aka ekpe elu. Kariri ezuru.
Ị nwere mmasị ịzụrụ ILIFE A11? ugbu a ị nwere ike nweta ọnụahịa kacha mma si ebe a
N'elu anyị nwere ihe mmetụta LiDAR na-enye ngwaọrụ ahụ iwu, bọtịnụ abụọ ON / Gbanyụọ ma laghachi na ọdụ ụgbọ mmiri na piano ojii nke ga-amasị ndị Fans nke uzuzu na mkpịsị aka. Ọ dịghị eccentricity gafere usoro nchaji ya pụrụ iche.
East, N'ebe dị anya site n'inwe pin na ala nke ngwaọrụ ahụ, ọ dị n'ihu na mpaghara ọla abụọ elongated nke ga-adaba na nha nha ha na isi nchaji, jikọtara ya na ọkụ eletrik. Amaghị m mmetụta nke a nwere ike inwe na ọkwa nke ihe ize ndụ eletriki, n'eziokwu, m na-ahọrọ atụdo kpochapụwo dị na ala nke ngwaọrụ ahụ.
Nke a ILIFE A11 nwere asambodo ROHS yana ike mmịpụta kacha nke ruru 4.000 Pa dabere na ọnọdụ nhicha nke anyị họrọla. Iji mee nke a, a kwadebere ya na batrị 5.200 mAh nke na-enye anyị nhicha ihe dịka nkeji 180. na ndị kasị echekwa aṅụ mode. Anyị enwebeghị ike ịchọpụta oke a n'ihi na nha ụlọ a na-eji nyochaa dị ntakịrị karịa ike nhicha nke ILIFE A11, ya bụ, anyị enwebeghị ike igbapu ihe karịrị 50% nke batrị ya.
Anyị nwere usoro nkewa ọtụtụ elu
Nwere teknụzụ Ihe ngosi LiDAR 2.0 nke na-eme ụfọdụ eserese mara mma na ngwa ngwa, na-enweta ike 3.000 sample kwa nkeji maka oke oke nke 8 mita. CV-Slam algọridim egosila ezigbo nsonaazụ na nyocha emere, na-esepụta ihe mgbochi dịka akwa, sofas na ọbụna tebụl nke ọma. Mgbe ihicha nke abụọ gasịrị, ọ na-eme ka arụmọrụ dịkwuo elu ma mee ka usoro ahụ dị ngwa n'ụzọ dị egwu, ihe a na-enwe ekele dị ukwuu n'elu ala, ebe enweghị ike ịhapụ ngwaọrụ ahụ na ngwaọrụ nke ya.
Ụdị nhicha na usoro 2-in-1
Anyị na-eme ka eziokwu ahụ pụta ìhè na ILIFE na-eme ka o doo anya na n'ụdị A11 anyị nwere ezigbo usoro nchacha na oghere abụọ. Ọ bụ ezie na nke a bụ eziokwu nke anyị ga-edo anya, anyị nwere otu tank maka mmiri na unyi, 500ml maka mkpọmkpọ ebe na naanị (ma ezuru) 200 maka mmiri. N'okwu a, ọ dị ịrịba ama na ọ nwere usoro "ịchacha" nke na-eme ka mmega ahụ dị n'aka site n'ịkwagharị ntakịrị, nke a na-eme ka ọ dịkwuo irè karị ma na-ezere nhụsianya. Otú ọ dị, dị ka m na-ekwukarị, a na-emepụta mops ndị a ka ha na-emetụ aka na parquet ma ọ bụ ala osisi, ha na-emekọrịtakwa nke ọma na ala seramiiki ebe ha na-ahapụ ọtụtụ akara mmiri.
Mmanụ ụgbọala tank: 500ml
Ngwakọta agwakọta: 300ml + 200ml
Ọ nwere ike mopping na vacuuming n'otu oge, anyị ga-edozi nke ahụ site na ngwa mkpanaka ya. Na nke a, Free maka ma gam akporo na iOS anyị nwere ike mekọrịta ILIFE A11 ma jikọta ya na Alexa, Onye enyemaka mebere Amazon irube isi na ntuziaka anyị gbasara ọrụ nhicha.
N'aka nke ya, anyị nwere ụzọ abụọ nke akwụkwọ ntuziaka, site na njikwa mmemme gụnyere na ngwaọrụ ahụ, yana usoro nchịkwa mebere nke gụnyere na ngwa ahụ. Ozugbo anyị nyochachara ụlọ ahụ, anyị ga-enwe ike:
Tọọ usoro nhicha mpaghara
Mee nhazi nhazi
Mee nhicha nke nsọtụ ma ọ bụ "Spot Mode"
N'etiti ọrụ ndị ọzọ na-ahụkarị, dị ka ohere nke ịhazigharị ike mmiri atọ.
Otú ọ dị, anyị enweghị ozi ziri ezi na decibels n'etiti nke a ILIFE A11, Otú ọ dị, ọ dị anya ịbụ otu n'ime ndị kasị dị jụụ na ahịa. Otú ọ dị, ọ nwere usoro nhicha nke "dị jụụ" nke na-ebelata ike, ma n'ihi ihe doro anya, ọ na-ebelatakwa ụda ụda nke ukwuu.
Este ILIFE A11 na-efu euro 369 dịka iwu n'ozuzu, n'agbanyeghị na enwere ọtụtụ onyinye na AliExpress, ọbụlagodi na mbupu sitere na mpaghara gị. nke ahụ ga-enye gị ohere ịnụ ụtọ ya na ọnụ ahịa a gbanwere karịa. Nke a bụ otu ihe ọzọ mere ị ga-eji buru n'uche na ILIFE A11 a bụ ihe ọzọ jupụtara na njirimara dị elu na ọnụahịa nke dị n'etiti etiti. Ị maraworị na ikike nchacha dị ka iwu n'ozuzu dị anya site na nke a na-enye site na usoro nchacha akwụkwọ ntuziaka, ma. mmiri ara ehi, nyocha 3D na ike ịmị ya na-eme ka ọ bụrụ nhọrọ na-adọrọ mmasị.
Ihe na: 25 March nke 2022
Mgbanwe ikpeazụ: 25 March nke 2022
Naanị na Alexa
Sistemụ nchaji dị egwu
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » General » ILIFE A11, ihe ọzọ nwere ọtụtụ atụmatụ na ọnụ ahịa dị mma [Nlebaanya]